ကလေးတွေဆီက အတုယူရမယ့် အကျင့်ကောင်း (၅) ခု | Women | Relationships | Duwun
Relationships: ကလေးတွေဆီက အတုယူရမယ့် အကျင့်ကောင်း (၅) ခု
Relationshipsကလေးတွေဆီက အတုယူရမယ့် အကျင့်ကောင်း (၅) ခု
ပျော်ရွှင်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ပျော်အောင်နေပါ။
လူကြီးတစ်ယောက်အဖြစ် ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေ များလာပြီ။ ပူပင်သောကတွေကြောင့်လည်း ညညဆို တော်တော်နဲ့ အိပ်မရဘူး။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း ကလေးတွေဆီကတောင် ပြန်ပြီး အတုယူရမယ့် အကျင့်လေးတွေ ရှိနေပြန်ရော။ ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် ကလေးဘဝတုန်းကလို အတွေးတွေ၊ ယုံကြည်ချက်တွေ ပြန်ပြီးမွေးမြူကြည့်ပါ။
အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့ လိုလာပြီဆို အကြာကြီးစဉ်းစားရတယ်။ ကလေးဘဝတုန်းကဆိုရင် အဲ့လိုတွေမရှိဘူး။ ဆော့စရာတစ်ခုခုရလာတဲ့အခါ ဆော့ချင်ဆော့တယ်၊ မဆော့ချင်ရင် ပစ်ထားလိုက်တယ်။ ဘာမှ ပူပန်မနေဘူး။ အကြာကြီးလည်း သောကမရောက်ဘူး။ ကိုယ်တွေလည်းပဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မြန်မြန်ချပြီးရင် ကျောခိုင်းသင့်တာကို လုံးဝ ကျောခိုင်းဖို့လိုတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတော့မယ်ဆိုရင် - တကယ်လုပ်ချင်တာလား? လုပ်သင့်တယ်၊ မှန်တယ်လို့ရောထင်လား? ဖြစ်သမျှအကျိုးဆက်ကို လက်ခံနိုင်မလား? ဒီသုံးချက်ကိုပဲ အဓိကစဉ်းစားပါ။
ကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင် ကစားစရာတွေကို အစီအစဉ်တကျ ဆော့တာမျိုး မရှိဘူးလေ။ အရုပ်ဆက်တာဆိုလည်း ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်ကို သူတို့က သိတာတောင်မဟုတ်ဘူး။ သူတို့လုပ်ချင်သလိုလုပ်ရင်းနဲ့ ဖြစ်သွားတာပဲ။ လက်တွေ့ဘဝမှာလည်း အစီအစဉ်တကျ ဖြစ်မလာတာတွေ ရှိလာတယ်။ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ဖန်တီးလုပ်ဆောင်မယ်ဆို ပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးဘဝတုန်းက စဉ်းစားတွေးခေါ်တာတွေဟာ သိပ်ကိုရဲရင့်ခဲ့ပါတယ်။ ရောက်နိုင်မယ်၊ မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာ မသေချာတဲ့ အမြင့်တွေကိုလည်း မရောက်ရောက်အောင် တက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လေ။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေလည်း အများကြီးပဲ ရှိခဲ့တယ်။ အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှ ရည်မှန်းချက်တွေ လျော့နည်းသွားတာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ကလေးတုန်းကလိုမျိုး ရည်မှန်းချက်တွေထားပါ။ လက်တွေ့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
တချို့ကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်။ လွယ်လွယ်နဲ့ပြောမရ ဆိုမရ ခေါင်းမာတယ်။ လုပ်ချင်တာကို မရရအောင် လုပ်ကြတယ်။ ကိုယ်တွေမှာလည်း ရည်မှန်းချက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ချိန်မှာ အနှောင့်အယှက်တွေ ကြုံရတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အလျှော့မပေးလိုက်နဲ့။ မဖြစ် ဖြစ်အောင်သာဆက်လုပ်။
ဒါလည်းပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တာနဲ့ ကိုယ်ရထားတာ ကွဲပြားနေတဲ့အပေါ် အတင်းကာရော ပျော်ရွှင်သလို မခံစားနေပါနဲ့။ ကလေးတွေဆိုရင် သူတို့မကြိုက်တာကို မကြိုက်ဘူးလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောကြတယ်လေ။ ကိုယ်မနှစ်သက်တာကို အတင်းအကျပ် လက်ခံထားတာက ပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။